विज्ञान/प्रविधि Archives - Page6of6- Citypokhara
इन्टरनेट सेवा ठप्प हुदा तीन जिल्ला प्रभावित
२०७३ पौष २६ , मंगलवार January 10, 2017 by Citypokhara.com
खोटाङ । इन्टरनेट नचल्दा तीन जिल्लाको कामकाज प्रभावित भएको छ । ३ दिनदेखि ईन्टरनेट सेवा ठप्प बन्दा खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुमा इन्टरनेटमा निर्भर भएर गर्नुपर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, सञ्चारमाध्यम, संघसंस्थाका काम प्रभावित भएको हो । रेडियो लिंकमा आएको �
पुस २७ गतेदेखि हुने चौंथों ‘ईक्यान शैक्षिक मेला’को तयारी तिव्र
२०७३ पौष १७ , आईतवार January 2, 2017 by Citypokhara.com
पोखरा । पुस २७ देखि २९ गतेसम्म पोखरा सभागृहमा हुने चौंथों ‘ईक्यान शैक्षिक मेला’को तयारी तिव्र पारिएको छ । मेला आयोजक नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) कास्कीले आइतबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरी मेलाको तयारीलाई तिब्रता दिएको जानकारी गराएको हो । इक्यानमा आबद्ध प�
२०७३ पौष १४ , बिहीवार December 29, 2016 by Citypokhara.com
पोखरा । सिर्जनशील कलाकार समूह पोखराको आयोजनामा कलाकार विश्वराज पराजुलीको पानी रंगमा सिर्जित “द व्युटीफुल एन्ड द सबलाइम” शीर्षकको एकल चित्रकला प्रदर्शनी विहिबार पोखरामा सुरु भएको छ । चित्रकलाको समुदघाटन गर्दै पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. चिरञ्जीवी शर�
फागुन ५ गते देखि आठौं संस्करणको क्यान इन्फोटेक २०१७ विथ मोबाइल एक्स्पो
२०७३ पौष १३ , बुधवार December 28, 2016 by Citypokhara.com
पोखरा । आगामी फागुन ५ गते देखि ८ गते सम्म पोखरामा ८ औँ संस्करणको क्यान इन्फोटेक २०१७ विथ मोबाइल एक्स्पो हुने भएको छ । कम्प्युटर एशोसिएन नेपाल महासंघ कास्कीको आयोजना तथा पोखरा इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसायी संघ कास्कीको सह—आयोजनामा नयाँवजार स्थित प्रदशनी केन्द्रमा उक्
मंगलमा फेरी भेटियो चम्चा !
२०७३ पौष १२ , मंगलवार by Citypokhara.com
एजेन्सी । मंगल ग्रहमा मानव बस्ती बसाउन सकिएला? के मंगल ग्रहमा पहिले जीवन थियो? हालै, मंगल ग्रहमा ठूलो चम्चा भेटिएको खबर छ। यो नासाले पठाएको रोभरले मंगल ग्रहमा भेट्टाएको दोस्रो चम्चा हो । यस्ता मानवीय वस्तु जस्ता देखिने चीज भेटिनाले मंगल ग्रहमा मानव बस्ती विकास ग